Profile Company - Huizhou Jinhaocheng Co., Ltd
Huizhou Jinhaocheng Non-xidhka daabaca Fabric Co., Ltd.
Huizhou Jinhaocheng Non-xidhka daabaca Fabric Co., Ltd, taas oo la aasaasay sanadkii 2005, iyadoo dhismaha warshad daboolaya meel ka mid ah 15,000 oo mitir oo laba jibbaaran, waa nonwovens fiber kiimikada shirkad xirfadeed wax soo saarka ku wajahan enterprise.Our ayaa ogaaday wax soo saarka si buuxda iswada, taas oo ay gaari karaan wadarta awoodda a sannadlaha ah wax soo saarka si ay 6,000 metrik leh in ka badan wax soo saarka tobanaan khadadka ee guud ahaan. Waxay ku taallaa degmada Huiyang, Huizhou City ee Gobolka Guangdong, halkaas oo ay jiraan laba isgoysyada-xawaaraha sare. Shirkadda Our jecel yahay helitaanka gaadiid habboon 40 daqiiqo ka eriday Shenzhen Yantian Port oo 30 daqiiqo ka Dongguan.
waxyaabaha Our kala qaybsan yihiin: Irbad feeray Taxanaha, Taxanaha Spunlace, kulul addoonsi (hawo kulul iyada oo loo marayo) Serial, Hot Rolling Serial, Quilting waxyaabaha ugu muhiimsan ee Serial iyo dukumiintiyo Series.Our yihiin: midabka MFT dareemay, daabacay, dhar gudaha baabuurta non-leh tolmo wanaagsan, muuqaalka geotextile injineernimada, maro saldhig rooga, bustaha korontada non-leh tolmo wanaagsan, masarka nadaafadda, suuf adag, derin ilaalinta alaabta guriga, suufka furaash, kursiga alaabta guriga iyo waxyaabaha non-leh tolmo wanaagsan others.These hubkaas ayaa loo isticmaalaa iyo tageerayaasha dhinacyo kala duwan ee bulshada casriga ah, sida sida: ilaalinta deegaanka, gaari, kabaha, alaabta guriga, joodariyaasha, dhar, shandadaha, alaabta lagu ciyaaro, filter, daryeelka caafimaadka, hadiyado, sahayda korontada, qalabka audio, dhismaha injineernimada iyo warshadaha kale. Xirrira sifooyinka alaabta, waxaan ma aha oo kaliya la kulmay baahida qoyska, laakiin sidoo kale dhoofiyo Japan, Australia, Koonfur-bari Eeshiya, Europe iyo meelo kale oo sidoo kale ku riyaaqayaa sumcad sare ka macaamiisha adduunka oo dhan.
tayada wax soo saarka High waxaa aasaas u ah our ganacsi. Iyada oo nidaamka maareynta nidaamsan iyo controllable, waxaan ka faa'iiday ISO9001 ah: shahaado habka maareynta tayo 2008. All alaabooyinka yihiin bay'adda iyo ilaa gaadho, nadiifsanaantii iyo PAH, Azofargestoffene, 16P benzene xiga, formaldehyde, GB / T8289, EN-71, ku-F 963 iyo heerarka imtixaanka hortagga dabka retardant olol BS5852 Heerka British. Intaa waxaa dheer, waxyaabaha aannu sidoo kale u hoggaansantaa RoHS iyo OEKO-100 heerarka.
Si ay u joogteeyaan tartan ee alaabta, Shirkadda bixisaa in ay cilmi-baarista iyo horumarinta ee alaabta cusub dareenka weyn, gaar loogu sameeyey R & D waaxda, oo ku qalabaysan qalab horumarsan iyo sidoo kale shaqaalaha adag, macquul ah, xirfadeed, iyo farsamada. R & D shaqada diiradda lagu saaray wax cusub iyo isbeddel horumarinta farsamada ee suuqa caalamiga ah, sida baahiyaha macaamiisha, horumarinta moodada iyo sare-tech joogo cusub non-leh tolmo wanaagsan products.At, our shirkadda ee R guud & heerka D, ayaa beehsa la dalabka suuqa caalamiga ah, oo uu ina siiyay dammaanad adag oo ah horumarinta suuqa xorta ah waxyaabaha aannu shirkadda ee hoggaamineed.
Waxa intaa dheer in lahaanshaha shaqaalaha teknoolojiyad sare maarmaan in horumarinta ganacsiga, shirkadda waa mid ka mid ah Horseedka warshadaha non-leh tolmo wanaagsan oo uu codsaday tiro ka mid ah waxyaabaha xiranayo iyo qalab cusub. Shirkadda Our dhaqmayso falsafada xudunta u ah "xirfad, daacadnimada iyo hal-abuurnimo" iyo Ujeedada maamulka oo ka mid ah "daacadnimo, tayada ugu horeysay, macaamiisha ugu horeysay". Waxaan sii wadaan in ay si firfircoon uga sahamin, sii on top, iyo wada-abuuro "guul" mustaqbalka dhalaalaya aad la!